Iyo Beta Notes kunyorera kunouya kuICloud.com | Ndinobva mac
Apple Inowedzera Beta Mazano paICloud.com yeOS X 10.11 uye iOS 9 Beta Testers
Miguel Angel Juncos | | apuro, ICloud, Mac Os X
Kutevera kuziviswa kuWWDC 2015 kutanga kwesvondo rino kuti Anotes app ichagadziridzwa, Apple yakaburitsa zviri pamutemo iyo beta vhezheni yeManotsi paICloud.com. Iyi vhezheni inongotarisirwa kune vanogadzira uye beta testers eIOS 9 uye OSX 10.11 El Capitan, iyo beta vhezheni yeManotsi inotsigira ese mabasa akaratidzirwa mukuratidzwa kwemusangano uye izvo vakagovana tarisiro pamwe nekuwanda kweiyo iPad kana iyo nyowani Apple mimhanzi yekushambadzira sevhisi pakati pevamwe.
Sezvandambotaura, chete uye chete vashandisi vanomhanyisa beta vhezheni yeIOS 9 kana OS X El Capitan ivo vanozoona iyi nyowani vhezheni yeManotsi, zvakadaro sezvakaratidzwa pa "beta" chitaridzi mukona yekumusoro kuruboshwe tinogona kuwana zvikanganiso kana zvakaremara mabasa, mamwe ese mashandisirwo akafanana chaizvo neaya ari mushanduro dzakatsiga.
Nhoroondo, pane kutungamira beta software kune beta vhezheni dzeIOS uye OS X, Apple yakaburitsa mawebhu maapplication chete kuburikidza neiyo beta.iCloud.com webhusaiti. Nenzira iyi nyowani, Apple inogona zvirinani kuona vashandisi vari kushandisa iyo nyowani yekushandisa masisitimu uye nekudaro zvirinani kudzikisira pasi mabugs uye makomendi kubva kune avo vashandisi.
Zvinoenderana nerogi iyo yatinogona kuverenga mune yazvino vhezheni yemanotsi:
Pane mavhezheni maviri eAnotes app anowanikwa paICloud.com. Iyo yaunoona inogadziriswa otomatiki paunopinda muICloud.com. Kana iwe ukagadzirisa yako iCloud Notes account pane iOS chishandiso ine iOS 9 beta kana paMac ine OS X v10.11 beta, uchaona yakagadziridzwa manotsi beta app paICloud.com. Kana zvisiri, iwe uchaona iyo yekutanga manotsi app paICloud.com. Iyo vhezheni yakashandiswa inoratidzwa muBhuku rekushandisa reManotsi.
Iyo nyowani Nyowani kunyorera ichabvumidza vashandisi kuwedzera mamwe akanyorwa manyorero netsika dhirowa, mifananidzo yakaunzwa uye zvinongedzo pasi pechikamu chekuwedzera. Sarudzo yekuwedzera chifananidzo ichave ichisanganisirwa mune huru rondedzero yekutarisa nekumisikidza, kuratidza thumbsibhurari uye kubvumira vashandisi kuti vakurumidze kuwana mufananidzo wavari kutsvaga. Uye zvakare, inobata ne maficha anonyanya kufarirwa saEvernote.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » ICloud » Apple Inowedzera Beta Mazano paICloud.com yeOS X 10.11 uye iOS 9 Beta Testers
Ok, avo vedu vakadzokera kumashure, tinozvimisa sei? 🙂
Mushure mekuvandudza MAZANO muIOS9 kana El Capitan…. kana ini ndoda kuyananisa zvinyorwa zvangu pamawindows kuburikidza icloud.com… zvichaenderana here? Kana iyo webhu vhezheni yeicloud.com haizoenderana nemifananidzo, madhirowa, zvinyorwa, nezvimwe?
mDNSresponder anogara pane OS X El Capitan
Yekutanga Apple Music zviziviso inosvika